Toyota Hypercar ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက် တွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ Gazoo Racing! – MyMedia Myanmar
Toyota Hypercar ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက် တွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ Gazoo Racing!
Toyota ရဲ့ Gazoo Racing Division ကနေ Racecar တစ်စီးကို တီထွင် နေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ကားကို ပဲ FIA Racing ရဲ့ Hypercar Class ထဲမှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အတွက် စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဆိုထားခဲ့ ကြပြန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Gazoo Racing ဆိုတာဟာ Toyota Group ထဲမှာ မှ Racecars တွေနဲ့ Production Models တွေကို ဖန်တီးပေးနေတဲ့ Motorsport Brand တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ စက်ရုံကနေ နာမည်ကြီး ကားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ 2021 Toyota GR Supra ကားတွေ၊ ဥရောပ သီးသန့် GR Yaris တွေ နဲ့ အတူ အသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့် GR Corolla တို့ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Hypercar အသစ် ဟာ ဆိုရင် လည်း ယခင်တုန်း က GR Project တွေနဲ့ တူညီလာမှာ မဟုတ်သလို လက်ရှိ ရှိထားပြီးသား Toyota Models တွေ အပေါ်မှာလည်း အခြေခံထွက်ပေါ်လာမှာတော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလို ဖန်တီးမယ့် အစား အဆိုပါကားကို Road Legal မျိုးကွဲ ၂၀ အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲအတွက် အဓိကထား ထုတ်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး Homologation ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေနဲ့အညီ ဖြစ်အောင်လည်း ဖန်တီးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အချိန် ထိတော့ အဆိုပါကား ကို Racing အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်လုပ်ရေး အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုမျိုး နာမည် တွေနဲ့ ခေါ်ဆိုမလဲ ဆိုတာကို မသိရသေးပဲ Gazoo Racing အနေနဲ့ကတော့ အဆိုပါ Hypercar အသစ်ကို လာမယ့် သော ကြာနေ့ ဇန်နဝါရီ လ ၁၅ ရက် နေ့ ၊ ၂၀၂၁ မှာ ပဲ ထုတ်ဖော် ပြသ တော့မှာပါ။
လောလောဆယ် Twitter အပေါ်က ထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ Teaser အရတော့ ယာဉ်မှာ ပါဝင်လာ နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင် ရည်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် တွေကို တွေ့မြင်ရမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Gazoo Racing ရဲ့ အဆိုအရတော့ ၅၀၀ kW ဒါမှ မဟုတ် 680 PS အထိရှိလာမှာ ဖြစ်ကာ hp အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 670 လောက် အထိ ရှိလာနိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့် မူလ Concept မှာ တုန်းကတော့ 986 hp လောက် အထိ ရှိမယ် လို့ ခန့်မှန်း ခဲ့ကြတာ ကြောင့် တကယ်တမ်းမှာ လျော့ကျ သွားပေမယ့်လည်း အချို့ သော Rumors တွေဆိုရင် 1,400 hp လောက် အထိ ရှိမယ်လို့ကို ခန့်မှန်း နေကြ ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ Powertrain စနစ်ကတော့ Four-Wheel Drive Hybrid Setup နဲ့ပဲ ပွဲထွက်လာနိုင်ပြီး Michelin ရဲ့ တာယာ အမျိုး အစားတွေကိုအသုံး ပြုလာနိုင်မယ် လို့လည်း အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကား ရဲ့ အလေးချိန်ကလည်း 1,030 kg (2,270 lb) အထိ ပဲ ရှိတာ ကြောင့် အခုလိုမျိုး Toyota ရဲ့ Hypercar ဟာ ထင် ထားတာ ထက်ကို ပိုပြီး မြန်ဆန် နေလိမ့်ဦးမယ်လို့ ယူဆရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမယ့် တစ်ချက် ကတော့ အခု Teaser ဟာ ဆိုရင် Racing Version အတွက် ပဲ ရှိသေးတာ ကြောင့် Le Man’s Hypercar ( LMH ) စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း တွေပေါ်မူတည် ပြီး အကန့် အသတ် နဲ့ ရှိနေနိုင်သေးတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်ပေါ် Road Cars တစ်ချို့ ဟာ ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ကား အမျိုး အစားတွေထက် တောင် ပိုပြီးမြန်ဆန် နေတာ ကြောင့် အခု ကားရဲ့ လမ်းမ ထက် မောင်းနှင်မယ့် ကား ဟာဆိုရင်လည်း 1,000 hp ကျော် လောက် အထိကို ရှိနေ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကားကတော့ “GR 010” လို့ အကြမ်းဖျဉ်း နာမည် သတ်မှတ်ထားပြီး Twin-Turbo 2.4 Liter Competition V6Engine ကို ဆက်လက် အသုံး ပြုလာနိုင်ပြီး လျှပ်စစ် မော်တာ ၃ လုံး ကိုလည်း တပ်ဆင် လာတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကား ဟာ Toyota ရဲ့ တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထား ပေမယ့်လည်း GR 010 အနေနဲ့က တော့ ဈေးနှုန်းက ပိုမိုများပြား လာနိုင်ပြီး အနည်းဆုံး $ 1 Million လောက် အထိ ရှိလာနိုင်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Toyota Hypercar ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက် တွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ Gazoo Racing! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-06T18:00:34+06:30January 6th, 2021|MYCARS MYANMAR|
Toyota Land Cruiser 40 ရဲ့ အင်ဂျင်အပါအဝင် အစိတ်အပိုင်း တစ်ချို့ကိုပါ ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ပေးဖို့ရှိ !
Nissan Rogue မှာ အသုံးပြုသင့်တဲ့ Mitsubishi ရဲ့ Hybrid နည်းပညာ!
ထင်ထင်ရှားရှား မြင်လာရတဲ့ 2022 Mercedes C-Class All-Terrain!
တကယ်ထူးခြားတဲ့ Aviator Concept အသစ်ကို စတင်ပြသလိုက်တဲ့ Lincoln!
ဒီဇယ် စွမ်းအင်သုံး Tundra ကို ချပြဖို့ ရှိလာနိုင်တဲ့ Toyota !
Chip ပြား ပြတ်လပ်မှု ပြဿနာကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု နှောင့်နှေးနေရပြန်တဲ့ နာမည်ကျော် Jeep Gladiator !
2022 Land Cruiser အသစ်တွေကို ပြန်ရောင်းခွင့်မရှိကြောင်း ကန့်သတ်ထားမှုအပေါ် ရှင်းပြလိုက်တဲ့ Toyota !
ဂျပန်က ခွေးချစ်သူတွေ အဖို့ ကားမှာ သုံးနိုင်မယ့် Paw Accessories တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Honda !
အတော်လေး ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာတဲ့ 2022 Honda Pilot!